Safarka - Page 3 - Geofumadas
SodelsCot, waxa ugu fiican ee lagu beddeli karo qoraalka codka
Waqti dheer ayaan horey u isticmaalay, inkastoo aan ku tijaabiyay dadka kale, tani waa midka ugu macquulsan iyo dhaqaale ee aan u arko ujeedo wax akhris badan wax aan indhaha ku haynin. Qoraal loogu talagalay codka Markaad haysato qoraalo dheer oo aad rabto in aad akhrido waa xal fudud oo fudud. Waxay kaliya u baahan tahay xulashada ...
Waxa ugu muhiimsan maanta, iyo sanadaha 60
Waxaan dalka ka baxo kuwa safarada in aad u dheer yihiin. Waxaan aad ka tagto in shirkadda halkaas oo wax aan ku Nooshahay daacad Writer qorsheeyay akhristayaasha laakiin rabto in aad u qaadato safarada waa markii aan ka heli nostalgic for call saddexaad ka gabadhayda i weydiiyo marka waan soo noqon doonaa in ay ...
Diyaarinta safarkayga Houston
Shalay ayaa timid mid ka mid ah martiqaadkaas kuwaas oo buuxiyay qanacsanaan badan, gaar ahaan marka ay sheeganayaan in ay ku jiraan kharashka socdaalka iyo joogista lacagta. Sidaa darteed waxaan ahay ... faraxsan, inkastoo noloshu aysan mar walba dhoola cadeyn, Google Earth, Raadinta Google iyo AdSense ayaa si fiican u bixiya barta feerka sida Geofumadas. Anigu waxaan joogi doonaa agagaarka Houston ...
blog Google Earth egeomates My
Engineering, egeomates My, safarka
In ka yar sawirada 10, ugu fiican ee fasaxdayda
Waan ku soo laabtay gurigeyga, way igu adagtahay in aan ku soo koobo boosteejo ku saabsan safarkayga laakiin waxaan isku dayi doonaa sawirro dhowr ah si aan u muujiyo. Qof ayaa ii sheegey hal maalin in in ka badan sawirada 10 ee post waa ixtiraam la'aan, waxaan lahaa in ay qaataan ugu yaraan hal muhiim ah iyo in ay ixtiraamaan xigmadda ...
Maalinta labaad, raadinta iyo dhiirigelinta
Maanta waxa uu ahaa Isniin weyn, subaxnimadu waxay nagu yaabisay shimbiro badan oo heesaya. Shiidaalka buuxinta hore oo bilaabay tuulooyinka buurta in beeralaydu kafeega yar si uu u doondoono qoyska wiilka saaxiibkay patronized, samaynta Baare, kiisaska kuwan macquul ah waxaa laga yaabaa in ay baadhaan qayb geliya xarumaha aasaasiga ah ...